Home Wararka (Deg Deg) Qarax laga maqlay inta badan magaalada oo Muqdisho ka dhacay
(Deg Deg) Qarax laga maqlay inta badan magaalada oo Muqdisho ka dhacay
Waxaa daqiiqada ka hor uu ka dhacay qarax dhaqiisa laga maqlay inta badan magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa la sheegayaa in uu ka dhacay agagaarka Buundooyinka ee degmada Xamar Jajab.
Waxaa la maqlayaa dhawaqa rasaas badan oo halkaa ka dhaceyso. Qaraxa ayaa imanaya iyadoo uu RW Rooble uu maanta gelinkii danbe kormeero ku sameeyo qaar ka mid ah xarumaha dowladda.
Sidoo kale lama xaqiijin weli cidda lala beegsaday qaraxaas oo sida aan xog hor dhac ah ku helanay ahaa mid miino.
Lama oga khasaaraha ka dhashay Qaraxa, waxaanan Faah Faahin dheeraad ah idiin soo gudbin doonaa dhowaan